Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: February 2010
မြင့်မောင် | တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၂ ရက် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၂၈ မိနစ်
“ပြည်သူလူထု လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရဖို့၊ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီရဖို့နဲ့ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ အောင်မြင်ဖို့ လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် သူ့ကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး သူရဲကောင်းဆု ပေးတာ ဖြစ်တယ်” ဟု UNA ထဲမှ အဖွဲ့အစည်းတခုဖြစ်သည့် ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် ZNC ဥက္ကဋ္ဌ ပူကျင့်ရှင်းထန်က ပြောသည်။
ဆုချီးမြှင့်ခံရသူ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက “အမှန်ကတော့ဗျာ၊ ဒီလောက်တောင် သူရဲကောင်းလည်း မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာ။ တကယ်တမ်း ပြောရလို့ရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ခေါင်းဆောင်ပြီး ပါလာတဲ့အခါမှာ ကျနော်ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကူညီဖို့ပဲ ပါလာတဲ့သူပါ” ဟု ပြောသည်။
ယခုလ ၂ဝ ရက်နေ့သည် ၆၂ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်နေသဖြင့် ZNC ဥက္ကဋ္ဌက ချင်းရိုးရာ ခြုံစောင်တထည်ကိုပါ ဦးတင်ဦးကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် လွှမ်းခြုံပေးခဲ့သည်။
“ခဲရာခဲဆစ် ကျနော်တို့ ချင်းပြည်နယ်ကို လာပြီးအပြန် ဒီပဲယင်းမှာ အရိုက်ခံရတယ်။ အခုလို ခံရပြီးတော့ ပထမဦးဆုံး အင်းစိန်ထောင်မှာ မပို့ဘဲ ကလေးထောင်မှာ ၈ လလောက် ကျတယ်။ ဦးတင်ဦးကို ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေက အသဲစွဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီအတွက် ပေးရခြင်း ဖြစ်တယ်” ဟု ပူကျင့်ရှင်းထန်က ပြောသည်။
ဦးတင်ဦးက “ချင်းတိုင်းရင်းသားများထဲက ပေးတာဆိုတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်၊ ဝမ်းသာတယ်။ သူတို့ နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောဆောင်တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်နဲ့ ယုံကြည်မှုရမှာသာ ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော် ထူထောင်နိုင်မှာပါ။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ တဖက်နဲ့ တဖက် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပါဝင်ပြီး ပေါင်းစပ်တဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင် တစိတ်တဒေသအားဖြင့် ကူညီနိုင်ဖို့ စိတ်ကူးပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
၂ဝဝ၃ ခု မေလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် NLD အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စည်းရုံးရေးခရီး ထွက်နေစဉ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒီပဲယင်းအရပ်တွင် စစ်အစိုးရ နောက်ခံပြု လူအုပ်စုကြီး၏ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက် ဦးတင်ဦး အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ပြောင်းရွှေ့ကျခံပြီးနောက် ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဝါရင့်နိုင်ငံရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၊ UNA အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များနှင့် NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်အချို့ အပါအဝင် လူဦးရေ ၅ဝ နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့သည်။
အခမ်းအနားတက်ခဲ့သည့် NLD CEC အဖွဲ့ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်က “ဦးတင်ဦးက သူဟာ သူရသတ္တိ ရှိကောင်း ရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူရသတ္တိအပြင် ဓမ္မသတ္တိပါ ရှိပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ခေါင်းဆောင်မျိုးရတာ အလွန်ကံကောင်းတယ်တဲ့။ သူအောင်မြင်အောင် ဝိုင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ကြပါလို့ အခန်းအနားမှာ ပြောကြားခဲ့တယ်” ဟု ပြန်ပြောပြသည်။
ဆုပေးအပ်ပွဲတွင် NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကို စတင်ခဲ့ရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုဋ္ဌေးကြွယ်၊ ကိုဂျင်မီ၊ ကိုပြုံးချိုနှင့် ကိုမြအေးတို့၏ လှုပ်ရှားမှုနောက်တွင် ပါဝင်လာခဲ့သူသာဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
UNA တွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများဖြစ်သည့် မွန်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီတပ်ဦး (MNDF)၊ ဇိုမီး အမျိုးသားကွန်ဂရက် (ZNC)၊ ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) နှင့် ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (SNLD) တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်လောင်းများအဖြစ် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် UNA ကို စစ်အစိုးရ တရားမဝင် အသင်းအဖွဲ့အဖြစ် ပြောဆိုထားခဲ့သည်။
62 Chin National Day
Burma Regime blasted mine in Panglong, but its media accused of Shan State Army
On the last day of 63rd Union Day funfair on February 16, the mine blasted at evening in Panglong Township Sport ground and wounded4villagers. After the blast, Burma regime blamed that SSA planted the mine and stepped up its propaganda media among the villagers to arrest and watch the movements of SSA.
SSA, as an armed group who has been fighting the Burma regime for independent fully denied the blast by saying that they have no policy of planting mine to kill the innocent people.
Burma regime has evil habit of planting mines and explosion bombs during the national festival of ethnic nationalities. In December of 2009, time bombs exposed during Karen New Year Festival in Pa Pone Township and injuredadozen of villagers. Burma regime accused of Karen National Army (KNU) for the explosion and spread the media among the villagers. KNU also has no policy to kill the innocent people.
Going back in year 2007, there was an explosion during Mon National Day festival in Three pagodas pass-Thai-Burma border and injured two villagers.
Ethnic nationalities of Burma now vividly clear that Burma regime has policy and strategy adoption to expose the bombs and blast mines and take other dangerous action at every time ethnic nationalities held their traditional or new year festivals in order to make the ethnic nationalities people fear, refrain from joining the festival, damage the festival and prevent the consequent of popularity for coming year.
Do you know that there never have bomb explosion and mines blast during the festival and ceremony of Burma regime and their supporter gathering and rally such as Union Solidarity and Development Association (USDA) under the hands of Than Shwe?
ဗမာစစ်အစိုးရက ခရစ်ယန်းဘာသာဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်နေသည် Burma military attacks Christians
ဗမာစစ်အစိုးရက ခရစ်ယန်းဘာသာဝင်တွေကို တိုက်ခိုက်နေသည်
Myanmar (MNN) ― More than 70 houses,amobile health clinic and two schools in Eastern Burma have been burnt down by army patrols stepping up the offensive on Karen villagers.
Burma, officially the Union of Myanmar, is the largest country by geographical area in Indochina (mainland Southeast Asia).
The Karen make up approximately7percent of the total Burmese population of 47 million people. They have fought for independence from Burma for over 60 years.
More attacks are expected as October elections draw near. "I was just in Burma last week. Talking with my contacts there, they're concerned thatalot more people will be killed before the elections."
Myanmar is run byamilitary junta. Junta chief Snr-Gen Than Shwe offered assurances that the upcoming election would be free and fair. However, Shwe desires power. "He's amassing huge amount of weather -- probably over $1 billion now that he has taken from the country. He wants to becomeacomplete dictator and have supreme control over the whole country." However, he doesn't have complete support of all the other military leaders.
According to Christian Solidarity Worldwide, Benedict Rogers said inanews release, "These latest attacks serve as clear evidence ofabrutal plan of ethnic cleansing against the minorities, instigated by Burma's military regime. Karen villagers have been subjected to severe human rights violations for far too long. Governments need to respond to these crimes against humanity by working to establishaUnited Nations commission of inquiry and an immediate and universal arms embargo."
Vision Beyond Borders needs your financial support to help the children and the Karen refugees.
MYANMAR: Political uncertainty pushes out ethnic minorities
BANGKOK, 18 February 2010 (IRIN) - A restive political situation in Myanmar has prompted thousands of Burmese refugees to flee to neighbouring countries, and the numbers are expected to grow as uncertainty continues, analysts and aid workers warn.
More than 30 ethnic armed groups have been involved in insurgencies against the central government since 1948, when Myanmar - previously known as Burma - gained independence from British colonial rule.
In the past 20 years, more thanadozen ethnic rebel groups have signed peace agreements with the ruling State Peace and Development Council (SPDC).
But there are fears of renewed fighting as the government tries to force the ethnic armies to surrender their weapons and formaspecial Border Guard Force under Burmese military control before long-awaited elections this year.
"If the political situation in Burma deteriorates further and fighting erupts, we can expect more than 200,000 new refugees, mainly Shan and Wa," the head of Thailand's National Security Council, Bhornchart Bunnag, told IRIN.
ဗမာပြည်မှာအကယ်၍ နိုင်ငံရေးအခြေအနေဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားလာပြီးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်လို.ရှိရင် အဓိက ဝပြည်နှင်သျှမ်းပြည်က နေ ဒုက္ခသည် နှစ်သိန်းကျော်ထွက်ပြေးရဖွယ်ရှိကြောင်း ထိုင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကပြောကြားသည်၊
Many of the signatories have resisted this move, including the largest organizations representing the Kachin, Mon and Wa, although some smaller groups have accepted it.
Estimates are rough, but the Wa say they have 20,000 armed soldiers, while the Kachin and Mon have 6,000 and 3,500 respectively.
"Atatime when we are trying to accomplish everything through politics, the SPDC wants to do something else," said James Lum Dau,aspokesman for the Kachin Independent Organization (KIO).
ပြဿနာအားလုံးကို နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်အဖြေရှာဖြေရှင်းရန် ကျနော်တို.ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာ ဗမာစစ်အစိုးရက အခြားသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနေသည် ဟု ကေအိုင်အိုပြောခွင့်ရှိသူ ဂျိမ်လွမ်းဒေါင် ကပြောကြားသည်၊
Aid workers and analysts say they are bracing forafurther influx of thousands of Karen and Mon refugees if fighting resumes.
"The political instability in Burma - with the elections due some time [in 2010] - and pressure on the ethnic armies to disarm, will drive more refugees to seek safety across the border, especially in Thailand," said Win Min,aBurmese academic based in Chiang Mai, in Thailand's north.
နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မဲ့အချိန်လည်းရောက်လာတော့မယ်၊တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ.တွေကို လက်နက်ချဖို.လုပ်လာမယ်ဆိုရင် ဒုက္ခသည်တွေကလည်းနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘေးလွတ်ရာနေရာကိုပိုမိုထွက်ပြေးမယ်၊ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံကိုပေါ့ ဟု ဦးဝင်မင်းပြောကြားသည်၊
In August 2009, the Burmese army attacked the ethnic Chinese Kokang, who call themselves the Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA), near the Chinese border.
The clashes resulted in more than 40,000 Kokang fleeing to China's southern Yunnan Province; activists say most have yet to return, even though the fighting has stopped.
Fierce fighting in eastern Karen State at the border with Thailand in June 2009 forced more than 3,000 refugees to flee across the border for safety, according to the regional office of the UN Refugee Agency (UNHCR) in Bangkok.
ဂျွန်လ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင်ကရင်ပြည်နယ်အရှေ.ပိုင်းဒေသမှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်းစွာဖြစ်ပွားသောကြောင့် ဒုက္ခသည် ၃၀၀၀ ကျော် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားပြီးနယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရသည်ဟု ဒေသဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဘန်ကောက်ရုံကပြောကြားသည်၊ထို.ဒက္ခ သည်တွေကို ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာ ရှိနေတုန်းဘဲလို. Kitty McKinsey ကပြောကြားသည်၊
Nearly all of these refugees are still in Thailand, said UNHCR regional spokeswoman, Kitty McKinsey.
"Right now, UNHCR does not feel conditions exist for the Karen or any other refugees in the nine camps along the Thai-Myanmar border to return to their homes in safety and dignity," she said.
လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင် ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေသောစခန်း(၉)ခုကနေကရင်ဒုက္ခသည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊အခြားသောဒုက္ခသ ည်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို.နိုင်ငံကိုလုံလုံခြုံခြုံ၊သိက္ခာရှိရှိပြန်သွားဖို.မဖြစ်သေးဘူး လို.သူမကဆက်ပြောပြသည်၊
Fresh Burmese army offensives are expected against the rebel Karen National Union (KNU) in eastern Myanmar. They have been fighting for autonomy from the central authorities for more than 60 years, and so far have not negotiatedatruce.
Meanwhile, the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) - which broke away from the KNU more thanadecade ago and agreedaceasefire pact with the Burmese army - has been forcibly conscripting civilians into its militia in preparation for the new border police force, according to KNU leaders.
ကေအန်ယူကနေခွဲထွက်သွားတဲ့ဒီကေဘီအေကလည်း ပြည်သူ.စစ်တပ်သားတွေစုဆောင်းနေသည်၊ဒီနှစ်အစောပိုင်းကစပြီး မိုးရာသီကုန်ဆုံးသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ ဆက်လက်စုဆောင်းနေတုန်းပဲ၊ တစ်ရွာကို စစ်သားနှစ်ယောက်၊ ဝေါ့ကီးတော့ကီးရေဒီယို စက်စသည့်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူဖို.လည်းကောက်ခံနေသည် ဟု ကေအန်ယူ အထွေအထွေအတွင်းရေမှုး ဇစ်ဖိုးရ စိန်းကပြောကြားသည်၊
"The press-ganging of Karen villagers started early this year and is continuing now the wet season is over," KNU general secretary, Zipporah Sein, told IRIN. "Every village has to provide two soldiers and money for equipment like walkie-talkie radios," she said.
"Successive military regimes have tried to eliminate all the ethnic minorities inside Burma in an effort to purify the population," David Thakerbaw,aKaren spokesman, said.
ဗမာစစ်အစိုးရက ဗမာပြည်တွင်းရှိတိုင်းရင်းသားအားလုံးကို သုတ်သင်ရှင်းထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်၊ဟု ဒေဗစ် သာကာဘော် ကပြောပြသည်၊
Muslim ethnic Rohingya in Myanmar's northern Rakhine State, who are considered stateless, typify the extent of systematic persecution faced by ethnic minorities, and have fled in their hundreds of thousands to Bangladesh, rights groups say.
"They are effectively denied citizenship, they have their land confiscated, and many are regularly forced to work on government projects," Benjamin Zawacki, Amnesty International's Burma researcher, told IRIN.
ရိုဟင်ဂျာတွေကလည်း နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ငြင်းပယ်ခံနေရသည်၊လယ်မြေတွေအသိမ်းခံနေရသည်၊အစိုးရစီမံကိန်းအလုပ်ကွင်း ထဲမှာ အကြပ်ကိုင်လုပ်ပေးနေရသည်၊
"The regime creates conditions and circumstances that make it clear to the Rohingyas that they are not wanted or welcome in the country," he added.
Genuine political solution needed
Analysts say the plight of Myanmar's ethnic minorities will not be resolved until there isagenuine political solution, and their rights are recognized.
"The first thing that needs to be done is to allow ethnic people to be educated in their own languages," Suboi Jum,aformer Kachin Baptist bishop in Myanmar, told IRIN.
ပထမလုပ်ရမဲ့အလုပ်ကတော့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေကို သူတို.မိခင်ဘာသာဖြင့် ပညာဆည်းပူခွင့်ရှိရန်လိုအပ် သည်ဟု ကချင်ဘုရားကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ကပြောပြသည်၊
A new constitution pushed through in 2008 guaranteesasubstantial number of seats for the military government and its allies in national and local parliaments, while marginalizing other political groups, rights organizations say.
And the 2010 national elections - the first to be held for 20 years - are not expected by observers such as the International Crisis Group to be free or fair.
The polls are unlikely to help the process of assimilation or integration of Burma's ethnic minorities, experts say.
ရွေးကောက်ပွဲသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို သွေးနှောဖို. သို.မဟုတ် သွေခွဲဖို.လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအထောက်အကူမဖြစ်ဘူး လို. ကျွမ်းကျင်သူများကပြောကြားသည်၊
"Burma's ethnic nationalities will find it difficult to achieve lasting peace and security withoutasettlement that guarantees their social and political rights," said Ashley South,ahistorian of the Mon and an ethnic specialist.
တိုင်း၇င်းသားပြည်သူလူထုတို.၏လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးအတွက်အာမခံချက်မရှိရင် တည်မြဲတဲ့ငြိမ်ချမ်းရေးနှင့်လုံ ခြုံရေးတွေကို အခက်အခဲရှိနေလိမ္မည်ဟု မွန်သမိုင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးကျွမ်းကျင်သူ ASHLEY South ကပြောပါသည်၊ လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းကာလကို တစ်ပွဲရိုက်တာထက်ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်ရေးဆွဲမှဖြစ်မယ် ဟု သူကဆက်ပြောပါသည်၊
"Socio-political transition in Burma is likely to beadrawn-out process, rather thanaone-off event."
18 February 2010 ဗွီအိုအေသတင်းမှကူးယူဖော်ပြသည်၊
မကြာခင်က ကရင်အရပ်သားတွေ နေထိုင်တဲ့ ရွာတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်တွေက စစ်အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း (Mr. Ban Ki-moon) က စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အခုလို ထိုးနှက်မှုတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ကိုလည်း တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ အဲဒီ့အပေါ် ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေ ရှိသလဲဆိုတာကို နော်ရှိုးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၀ နှစ်သစ်အ၀င်ကစလို့ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းတို့မှာရှိတဲ့ ကရင်ရွာတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရ တပ်တွေက တိုးမြှင့်တိုက်ခိုက် နှိမ်နင်းမှုတွေ ရှိနေတဲ့ အပေါ်မှာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဲဒီလို တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းက မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ပြောခွင့်ရသူ မစ်စ် မာရီး အိုကာဘဲ (Ms. Marie Okabe) ကလည်း မနေ့က ကုလသမဂ္ဂ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တခုမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“မကြာခင်က ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် သိရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကရင်အရပ်သားတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်က စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်နေပါတယ်။ သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေ တာဝန်ရှိရှိ လုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ သူအကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့သလိုပဲ အဲဒီလို ထိုးနှက်မှုတွေကို ချက်ချင်း ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို သူသွားခဲ့တုန်းကလည်း အဲဒီလို ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။”
အခုလို ကရင်တိုင်းရင်းသား ရွာတွေအပေါ် စစ်အစိုးရဘက်က တိုးမြှင့်တိုက်ခိုက်လာတဲ့ အကြောင်းကို စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် မယူသေးတဲ့ အကြီးဆုံး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ရဲ့ ဂျာမဏီနိုင်ငံ အခြေစိုက် ကိုယ်စားလှယ် မန်းအောင်လွင်က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“လောလောဆယ် နအဖကနေပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ နီးတဲ့အခါမှာ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ အကြောင်းရှာပြီး ဖမ်းဆီး ထောင်ချနေတယ်။ ပြီးတော့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ၊ ဥပမာ KNU လိုမျိုးပေါ့ စစ်မှန်တဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်အတွက် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြင်းထန်စွာ ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးဆန်းတာက ဒီတခေါက်က တကယ်ပဲ အပြစ်မဲ့တဲ့ ကရင်ရွာသူ ရွာသားများကို တိုက်ခိုက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
“ဥပမာ တွယ်လွယ်ထူး၊ ညောင်လေးပင်၊ မူထရော၊ ဖာပွန်၊ ကျောက်ကြီး အစရှိတဲ့ ဒေသမှာရှိတဲ့ ကရင်ရွာတွေကို နအဖက တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အဲဒီမှာ လက်နက်ကိုင် ကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေ မရှိပါဘူး။ တကယ်ပဲ ရိုးသားဖြူစင်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်တဲ့ ကရင် ရွာသူရွာသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ရွာတွေကို မီးရှို့တယ်၊ အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်၊ ပစ္စည်းတွေကို လုယက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
“အဲဒါ ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ နအဖက လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီနယ် ဒီဒေသတွေက တချိန်တခါက NLD အတိုက်အခံကို မဲထည့်တဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မဲမပေးနိုင်အောင် တနည်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ သူတို့ကို မောင်းထုတ်တဲ့ သဘောမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တချက်က တနင်္သာရီဘက်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။”
ဆက်လက်ပြီး မန်းအောင်လွင်က မြန်မာပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုဟာ အရေးကြီးသလို တချိန်တည်းမှာပဲ ပြည်တွင်းက တိုင်းရင်းသား အားလုံးကလည်း တာဝန်သိသိ လက်တွဲပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“တကယ်တော့ နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှုဟာ အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လောလောဆယ် ကရင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကရင်ရွာသူ ရွာသားတွေကို နအဖက အခုလို ရက်စက်ယုတ်မာစွာ သတ်ဖြတ်နေတာကို ရပ်တန်းကရပ်အောင် လုပ်ဖို့ကတော့ ပြည်တွင်းမှာရှိသော ကရင်တမျိုးသားလုံးနဲ့ တခြား တိုင်းရင်းသား အားလုံးတို့ရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ နအဖက ကရင်လူမျိုးတွေကို ငွေအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရာထူးအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဘာသာရေးအားဖြင့် လည်းကောင်း သွေးခွဲပြီး အိုးမည်းသုတ် အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေတာကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
“ဒီတော့ ဒီအချိန်မှာ ကရင်လူမျိုး အားလုံးဟာ သွေးစည်းညီညွတ်ရမယ့်အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ဗမာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက ၆၂ ခုနှစ်ကစပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက တိုင်းပြည်ရဲ့ အာဏာကို မတရားသိမ်းယူပြီး စစ်တပ်က စစ်သားအလုပ် မဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ အခြားသော နိုင်ငံရေးရာ ကိစ္စတွေမှာ ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်တဲ့ အတွက် ဗမာပြည်ကြီးဟာ သယံဇာတပစ္စည်း ပေါကြွယ်ဝရဲ့သားနဲ့ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာမှာ အဆင်းရဲဆုံးစာရင်း ၀င်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ အပေါင်းအပါ တစုကို လူထုဟာ ငြိမ်းချမ်းသောနည်းနဲ့ အနာဂတ်မှာ တိုက်ပွဲဝင် ဆန္ဒပြတဲ့အခါ ပြည်သူကို ချစ်မြတ်နိုးသော စစ်တပ်မှ အရာရှိ ခေါင်းဆောင်များနဲ့ ရဲဘော်များဟာ ပြည်သူနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ပြည်သူချစ်တဲ့ တပ်မတော်တခု ပေါ်ပေါက်ဖို့နဲ့ ပြည်သူနဲ့အတူ၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံးတို့နဲ့အတူ ဗမာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးကို လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာစစ်အစိုးရက အခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစေရမယ်လို့ ပြောနေပေမဲ့ နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊ သတင်းသမားတွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချမှုတွေ ရှိနေသလို အရပ်သားတွေ နေထိုင်ရာ ဒေသတွေမှာလည်း စစ်အင်အားသုံးပြီး ထိုးနှက်မှုတွေ ရှိနေတာပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း တနေ့က Amnesty International နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးက ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာတွေအပေါ် အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုတွေကို ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ အစီရင်ခံစာတရပ် ထုတ်ပြန်ပြီး တိုက်တွန်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
If you meet Mrs. Suu Kyi, please tell her that her party should haveadecisive decision whether or not to participate the upcoming election since she knows well that Than Shwe will never change his mind to review the 2008 constitution. Please also tell her that the people of Burma now has more understanding the tricky politic of the military regime during she has been placing under house arrest. for years .So, tell her don't worry if she thinks that people of Burma still afraid of the regime, but don't forget to tell her that she needs to giveadecisive decision to the people so we can go ahead without barrier.
If you meet ethnic nationalities leaders, please tell them that Burma cannot go ahead to overcome the dead lock political problem without their participation in the upcoming election. So, tell them that don't worry if they don't have ethnic nationalities representatives in parliament since they don't need to have it because the constitution do not guarantee what they have been asking for decades such as self-determination and genuine federal union.
မွန်ကရက်၊ ကောင်းဝါဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၃၊၂၀၁၀။
မွန်ကရက်(ဖေဖေါ်ဝါရီ-၁၂)။ ။ UNA ခေါ် ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမဟာမိတ်အဖွဲ့က ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ (၆၃) နှစ်မြောက်ပြည်ထောင်စု ညစာစားပွဲတစ်ရပ် အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးအေးသာအောင်၊ နိုင်ထွန်းသိန်း၊ ကျင့်ရှင်းထန်၊ တောင်ကိုထောင်း၊ ဦးသိန်းဖေတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့အတူ NLD ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည့် ဦးဝင်းတင်၊ ဦးအုန်းကြိုင်၊ ဦးဥာဏ်ဝင်းနှင့် ဒေါက်တာမေဝင်းမြင့်တို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့အပြင် အထင်ကရရှေ့နေများဖြစ်ကြသည့် ဦးကျော်ဟိုး၊ ဦးအောင်သိန်း၊ ဦးခင်မောင်ရှိန်၊ ဦးမောင်မောင်လတ်၊ ဦးအေးသိန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့ကိုလည်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အထူးသဖြင့် ဤအခမ်းအနားတွင် SNLD, ALD, ZNC, MNDF အဖွဲ့ဝင်များ၊ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ၊ NLD အဖွဲ့ဝင်အချို့ စုစုပေါင်းအင်အား (၅၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ညစာစားပွဲကို golden duck restaurant တွင် ညနေ(၆)နာရီမှ (၉)နာရီအထိကျင်းပနေစဉ် အာဏာပိုင်များက မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့်လာရောက်ပြီး အခြေအနေများစောင့်ကြည့်နေစဉ် ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုများရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သို့သော် အခြေအနေတစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားမှုမရှိခဲ့ဟု သိရသည်။
အင်းဒိုနီရှား လာဘ်စားတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အကြီးအကဲ အန်တစာရီ အဇာဟာ တရားရုံတွင်ရင်ဆိုင်နေချိန်မှာခေါင်းကို က်စွာ စိတ်ပျက်နေပုံ၊
အင်းဒိုနီရှား လာဘ်စားတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်အကြီးအကဲ အန်တစာရီ အဇာဟာ တရားရုံတွင်ရင်ဆိုင်နေချိန်မှာခေါင်းကို က်စွာစိတ်ပျက်နေပုံ၊နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်၏လူသတ်မှုတွင်းသူကအဓိကစီစဉ်သူဟုတရားသူကြီးကပြစ်
SELF DESPAIR: Former chief of Indonesia’s anticorruption commission, Antasari Azhar held his head during his trial at South Jakarta District Court in Jakarta, Indonesia, on Thursday. An Indonesian judge found Mr. Azhar guilty of masterminding the murder ofastate businessman, but spared him the death penalty prosecutors had sought. (Achmad Ibrahim/Associated Press)
“ကျနော်တို.သည် သျှမ်းဖြစ်သည်၊ဗမာမဟုတ်ပါ၊ကျနော်တို.နှင့်ဗမာ က ဘာသာစကားလည်းမတူ၊ယဉ်းကျေးမှုလည်းမတူ ကြဘူး”လို. သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏နိုင်ငံခြားရေးဌာနအကြီးအကဲ ယွတ်မိုင်းကပြောပြသည်၊
"We are Shan, we are not Burmese. We haveadifferent language,adifferent culture," said Yawdmuang, the Shan State army's foreign affairs chief.
LOI TAI LENG, Myanmar (Reuters) - Whether the country is ruled by brutal military dictators or democratically elected civilians, rebels who control this jungle enclave have made one thing very clear: they want nothing to do with Myanmar.
The country once known as Burma is preparing for its first elections in 20 years, the final step inademocratic "road map" it says will end almost halfacentury of unbroken army rule.
"We will not participate in elections -- they are their elections," he said.
The views of this group are echoed by other ethnic armies in Myanmar, which have also resisted the military regime's demands to disarm, transfer their fighters toagovernment-run Border Guard Force (BGF) and join the political process.
But after years of bloody conflict and deep distrust, the junta's pledges of autonomy in return for their cooperation ring hollow and have cut little ice among these ethnic groups.
Huge crowds of Shan people gathered onaremote mountain plateau to watch well-trained and disciplined troops celebrate the state's 63rd National Day on February7withaparade of pomp and military might to rival the junta's vast "Tatmadaw" armed forces.
The Shan accept their refusal to play ball with Myanmar's stubborn generals could lead to an all-out conflict with the Tatmadaw, which has so far convinced, or forced, six smaller armed groups to join their BGF.
"We've been fighting for our independence for more than 50 years and we won't stop until we win," said Lieutenant-General Yawd Serk, the long-serving chief of the Shan State Army (SSA).
"We will try to negotiate. But if this fails, we have no other option than to settle this with military means."
Once backed by China, the Wa has an estimated 36,000 troops with arms funded by revenues generated from the sale of opium used to make heroin. Analysts sayaconflict with the Wa, whose territory borders Myanmar's key economic ally, China, could be protracted and bloody and would sparkarefugee crisis.
The Wa have long been in conflict with other ethnic groups but with the junta's mooted February 28 disarmament deadline approaching, the far smaller SSA now facesabig dilemma.
Despite its strict anti-narcotics stance, it realizes it needs to bury the hatchet and form an alliance with the Wa -- or face the full force of the Myanmar army alone.
"The junta is their enemy, it is our enemy and to survive against them, we must have unity," Yawdmuang said.
"Our aims are the same, we can work together. We can let bygones be bygones if the Wa accept our anti-narcotics policy.
"But if they don't accept it, we cannot have unity," he said.
သျှမ်းခေါင်းခေါင်းဆောင်များလွှတ်ပေးရန် စစ်အုပ်စုထိပ်သီးကြီးထံ SNLD တောင်းဆို
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 10 ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
သျှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွန့်လွင်တို့အား လွှတ်ပေးရန် SNLD အတွင်းရေးမှူးများအဖွဲ့က တပ်မတော်အကြီးအကဲထံသို့ ယနေ့ရက်စွဲနှင့် ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
ကြေငြာချက်တွင် SNLD ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွှန့်လွင်တို့အားသက်ဆိုင်ရာ နအဖ တာဝန်ရှိသူများက ခေတ္တတွေ့ဆုံရန် ခေါ်ဆောင်သွားသည်မှစ၍ ပူတာအိုမြို့အကျဉ်းထောင် နှင့် ကလေးမြို့အကျဉ်း ထောင်တို့၌ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခံထားရသည်မှာ ယနေ့တွင် ၅ နှစ် တင်းတင်းပြည့်မြောက် ပြီဖြစ်သည်ဟုဆိုပါ သည်
နအဖ ဖမ်းဆီးထားသည့် သျှမ်းခေါင်းဆောင်များ ( ဆရာဦးမြင့်သန်း သံတွဲထောင်၌သေဆုံး၊ စ၀်သာဦး ၂၀၀၉ က ပြန်လည်လွှတ်မြောက်)
သဘောထားမတိုက်ဆိုင်သူ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းအကျဉ်းချထားခြင်းမှာ နိုင်ငံတော် အတွက် လုံးဝ အကျိုးမရှိသည့်အပြင် အမျိုးသားသွေးစည်းညီညွတ်မှု နှင့် ဒီမိုကရေစီဖေါ်ဆောင်မှုအဖို့ များစွာထိခိုက်နစ်နာစေ သည်ဟုလည်း ဖေါ်ပြထား၏။
အဆိုပါ SNLD ၏ ကြေငြာချက် နောက်ဆုံးအပိုဒ်တွင် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသော သျှမ်းတိုင်းရင်းသား များဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦး နှင့် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွှန့်လွင်အပါအ၀င်နိုင်ငံရေးယုံကြည် ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ၊ နေအိမ်တွင် ကန့်သတ်မိန့်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံနေရသူများ အားလုံး(အားလုံး) ကို ခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးပြီး တပ်မတော်အကြီးအကဲများ အတိုက်အခံ နိုင်ငံ ရေးအင်အားစုများနှင့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ စုံညီစွာပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး အမြန်ဆုံးစတင်ဆောင်ရွက်သွားပါရန်အရေးတကြီးလို အပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တိုက်တွန်း ထားပါသည်။
၂၀၀၅ သျှမ်းပြည်အတိုင်အပင်ခံကောင်စီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် ကြိုးစားမှုအပေါ် နအဖ စစ်အစိုးရ က ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရန်ကြံစည်မှုဟု စွပ်စွဲကာ ခွန်ထွန်းဦး နှင့် စိုင်းညွန့်လွင် အပါအ၀င် သျှမ်းခေါင်းဆောင် ၉ ဦးအားလူ့သက်တမ်း ထက်ရှည်ကြာသည့်ထောင်ဒဏ်ဖြင့် နအဖက အသီးသီးပစ်ဒဏ်ပေးခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (6)နိုင်ငံစစ်ရေးပူတွဲလေ့ကျင့်ရာမှာ တောတွင်းအသက်ရှင်ရေးစစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ကင်းမြီးကောက်စားနေပ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (6)နိုင်ငံစစ်ရေးပူတွဲလေ့ကျင့်ရာမှာ တောတွင်းအသက်ရှင်ရေးစစ်လေ့ကျင့်ခန်းတွင် ကင်းမြီးကောက်စားနေပုံ
NOT A PICKY EATER: A U.S. Marine ateascorpion duringajungle survival exercise with the Thai Navy in Chon Buri Province, Thailand, Tuesday. More than 10,000 soldiers from six countries are participating in the Cobra Gold 2010 joint military exercise. (Chaiwat Subprasom/Reuters)
Australian Greens says Navy exercise with Burma unacceptable
သြစတြေရီးယားအစိုးရအနေနဲ. ဗမာစစ်အစိုးရနှင့် ရေကြောင်းပူးတွဲစစ်လေ့ကျင့်ခြင်းကိုသြစတြရီးယား အတိုက်အခံပါတီတစ်ခုဖြစ်သော Green ကမေးခွန်ထုတ်
ဗမာစစ်အစိုးရအပေါ် စစ်ရေးပိတ်ဆို.အရေးယူမှုရှိပါလျက် သြစတြေရီးယားအစိုးရအနေနဲ.ဘာကြောင့်ရေကြောင်းကင်းလှည့် လှေတွေကိုပို.ပြီး ပူးတွဲစစ်လေ့ကျင့်မှုလုပ်နေသလဲဆို.တာကို အတိုက်အခံပါတီတစ်ခုဖြစ်သော ဂရိမ်းပါတီက အစိုးရကိုမေးခွန် ထုတ်နေပါသည်၊သြစတြေရီးယား ရေကြောင်းကင်းလှည့်လှေ HMAS Glenelg က မိလန်စစ်လေ့ကျင့်ပါဝင်ခြင်းကိုအဆုံးသ တ်ပြီးဖြစ်ပါသည်၊ နှစ်စဉ်ရေကြောင်းစစ်ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုကို အိန္ဒိယအစိုးရကဦးဆောင်ပြီး ဗမာအပါအဝင် ၁၃ နိုင်ငံပါဝင်သည်၊
ဗမာစစ်အစိုးရအပေါ်စစ်သင်တန်နှင့်လက်နက်များပံ့ပိုကူညီခြင်းပိတ်ဆို.အရေးယူမှုကို သြစတြေရီးယားအစိုးရကလက်မှတ်ရေး ထိုးထားသော်လည်း ဤပူးတွဲစစ်လေ့ကျင့်ပွဲတွင် ပါဝင်လာတာ ၃ နှစ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်ပါသည်။
Updated February 10, 2010 14:33:10
Australia's minor opposition political party, the Greens, is questioning why Australia sentaNavy patrol boat to take part inamilitary exercise with Burma, despite having military sanctions against the regime. The Australian patrol boat, HMAS Glenelg, has just finished taking part in 'Exercise Milan'. The annual exercise is organised by India and involves the navies of 13 countries, including Burma. It's the third year Australia's taken part, despite signing up to sanctions against Burma, which ban training and arms sales.
ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ SSA ခေါင်းဆောင် အခိုင်အမာပြော
မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒီနှစ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားပေမဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SSA အဖွဲ့ကတော့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲကိုပဲ ဆက်ပြီး ဆင်နွှဲသွားမယ်လို့ ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့မှာ အခိုင်အမာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေကို မယုံကြည်တဲ့အတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို မစွန့်နိုင်သေးတာလို့ လေ့လာသူတွေက သုံးသပ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့က ထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ SSA ရှမ်းပြည်တပ်မတော် ဌာနချုပ် လွိုင်တိုင်းလန်းမှာ SSA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ၆၃ ကြိမ်မြောက် ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရှမ်းလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁,၀၀၀ လောက် စစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီး အခမ်းအနားမှာ ချီတက်ခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနားမှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်က ရှမ်းပြည်အတွက် သီးသန့်ရေးဆွဲထားတဲ့ အလံကို လွှင့်ထူထားပါတယ်။
SSA ရှမ်းတပ်မတော်ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွက်ဆစ် (Yawd Serk) ကတော့ AK 47 မောင်းပြန်သေနတ်တွေ၊ M 16 သေနတ်တွေ ကိုင်ထားတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အခုလို မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။
ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၀၂။
“ကျနော်တို့ ညီညီညွတ်ညွတ် သင့်သင့်မြတ်မြတ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ပြန်ရအောင် တိုက်ကြမယ်။” လို့ အခမ်းအနားမှာ သူက ပြောသွားတာပါ။
ဒီလို SSA ခေါင်းဆောင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရွက်ဆစ် ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အချိန်ဟာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရအကြား တင်းမာမှုတွေ ပိုပြီး ကြီးထွားလာနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်နေတဲ့အချိန် ဖြစ်သလို အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက ဖိအားပေးနေတဲ့ အချိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ထိုင်းနယ်စပ် အခြေစိုက် ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်း အယ်ဒီတာချုပ် ဦးခွန်ဆိုင်းက ဒီလို လက်နက်ကိုင် လမ်းစဉ်ကို မစွန့်နိုင်သေးတာဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေက တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တန်းတူရေး အခွင့်အရေးတွေကို အာမခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“ဒီ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဟာ ဖြစ်မယ်လို့တော့ ထင်တယ်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ NLD တို့၊ SNLD တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက ထောင်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘာများ အဓိပ္ပာယ်ရှိမှာလဲ၊ အဲလို မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။ ကျနော့်အမြင် ပြောရရင်တော့ ဒီနည်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်မယ်ဆိုတာ ဆုံကြီးကို တောင်ပေါ် တွန်းတင်တာနဲ့ အတူတူပါပဲလို့ အဲလိုပဲ မြင်တယ်။”
မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ၁၇ ဖွဲ့နဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်တွေ ချမှတ်ထားတယ်လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ကို အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးနေပေမဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အားလုံးက ဒီလို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းဖို့ သဘောတူသေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အတွက် ဒီ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စက ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် အပြီးသတ် လုပ်ဆောင်မယ့် ကိစ္စတခုလို့ လေ့လာသူတွေက ရှုမြင်ပါတယ်။
SSA တောင်ပိုင်းဟာ စစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ မဟုတ်တဲ့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ အထဲမှာ မပါပါဘူး။
ရှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစာ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးခွန်ဆိုင်းကတော့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေအပေါ် စစ်အစိုးရဘက်က ချဉ်းကပ်ပုံတွေကလည်း တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ ချဉ်းကပ်ပုံ မတူဘူးလို့ ပြောဆိုနေပါတယ်။
“သူတို့ မူအရ လက်ခံတယ်လို့ ဒီလိုပဲ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နအဖက မူအရ လက်ခံတယ်ဆိုရင်လည်း ဒါက လက်ခံတာပဲ ဆိုပြီးတော့ သူတို့ကို ပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ဖို့ ညွှန်ကြားလာတာပဲ ရှိတာပေါ့။ ၀ဆိုရင် မူအရ လက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့ ၀ကို သူက ဘာမှ မဆွေးနွေးတော့ဘူး။ သို့သော်လည်း SSA ကျတော့ မူအရ လက်ခံတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား ဖွဲ့ဖို့ ပြင်တော့ဆိုပြီး တခါတည်း ညွှန်ကြားတယ်။ မုန်းလားအဖွဲ့က မူအရ လက်ခံတယ်ဆိုတော့ လူစာရင်း၊ လက်နက်စာရင်း ပေးပါဆိုပြီး တောင်းတယ်။ သူက တဖွဲ့ချင်းကို ချဉ်းကပ်ပုံ မတူဘူးဆိုတာကို ပြောပြတာပါ။”
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေ သဘောတူသည် ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းအတွင်း ကိုးကန့်ဒေသမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေက မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲ့ သူတို့လိုချင်တဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို အင်အားသုံးပြီး အတင်းအကျပ် မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတာ ပြသလိုက်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလို ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် ဆယ်စုနှစ်ချီ ကြာခဲ့တဲ့ လက်နက်ကိုင် တိုက်ပွဲတွေ အဆုံးသတ် ချုပ်ငြိမ်းသွားမလား ဆိုတာကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ အများအပြား ရှိနေသလို အကဲခတ်တွေ တော်တော်များများကလည်း မယုံကြည်ကြပါဘူး။
လက်နက်ကိုင် အင်အား ၁၀,၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ SSA ကတော့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးကို လက်နက်ကိုင် ကာကွယ်မှ လုံခြုံစိတ်ချရသလို လက်နက်ကိုင်တိုက်မှ ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားဆဲ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၆၃ နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားမှာ သေနတ်တွေ ပစ်ဖောက် ပြသကြပါတယ်။
ဒီသေနတ်သံတွေကပဲ ဒီနှစ်ထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ် ဆိုပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အိပ်မက်တခုဖြစ်တဲ့ တောင်တန်းဒေသတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်နယ်ပြည်မ တန်းတူရေး ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ အလှမ်းဝေးနေသေးတယ် ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်သလိုလည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
၁၉၅၉ တန့်ယန်းတိုက်ပွဲနှင့် နာမည်ကြီးတဲ့ သျှမ်းတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ဒေ၀ိန် အသက် ၈၉ နှစ်သည် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ် နောင်ကော်ရွာနေအိမ်မှာ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက်က ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ဒေ၀ိန် ကို လုံးကြာဆိုင် ပါ့နန်းကူ တို့က ၁၉၂၁ မေလ ၂၈ ရက်၌ မိုင်းရယ်မြို့နယ် မိုင်းမားအုပ်စု ၀မ့်နမ့်ဖတ်လိန်း ရွာတွင်မွေးဖွားခဲ့၏။ ၃ ၀ါကြာ ကိုရင်ဝတ်နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးပညာ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့၏။ အိမ်ထောင်ဆက် ၃ ဆက်၊ သားသမီး ၇ ယောက် မြေးမြစ်များစွာထွန်ကားသည်ဟုလည်း မိသား စုဝင်တဦးက ပြောပါသည်။
၁၉၄၅- ၁၉၅၃ နယ်ကျွံလာတဲ့ တရုပ်ဖြူတပ်များကို မိုင်းတွမ်းမြို့စားနှင့် အတူ ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန် တွန်းလှန် တိုက်ထုတ် ခဲ့၏။ ၁၉၅၉ သျှမ်းပြည်တော်လှန်ရေးစတင်ချိန်ကစပြီး တော်လှန်ရေးခရီးထဲပါဝင်လာသည်။
၁၉၅၉ နိုဝင်ဘာ ၁၅-၃၀ ရက်နေ့အထိ တန့်ယန်းမြို့ကို နွံစစ်ဟန်သျှမ်းတော် လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ ၀င်ရောက်သိမ်းစဉ် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်။ လားရှိုး - တန့်ယန်း လမ်းမပေါ်ရှိ ဗမာ့တပ် မတော် လွယ်ပန်ဖရားတပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ပြီး ဗမာ့တပ်မတော် စစ်ကူမဖြည့်နိုင်ရန် ဖြတ် တောက်ထားသောကြောင့် ဗိုလ်မောင်ဦးဆောင် သည့် နွံစစ်ဟန် တပ်ဖွဲ့တို့ တန့်ယန်းမြို့အား သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်။ ဗမာ့တပ်မတော်က အင်အားသုံးပြီးတိုက်လေယာဉ်များ နှင့် အဆက်မပျက်ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက် သောကြောင့် ၁၉၅၉ နိုဝင်ဘာ လကုန်မှာ ဗိုလ်ဒေ၀ိန်တို့အဖွဲ့ တပ်ဆုတ်ခဲ့ရပါသည်။
တန့်ယန်းမြို့အား ၁၀ ရက်ကျော်ကြာ သိမ်းပိုက်နိုင်သည့်သတင်းများ နိုင်ငံခြားအသံလွှင့်ရုံ မှ လွှင့်ထုတ်ခဲ့သော ကြောင့် သျှမ်းတော်လှန်ရေးခရီး ပထမခြေလှမ်း ကမ္ဘာကိုသိစေခဲ့ပါသည်၊ အဆိုပါတိုက်ပွဲ ကြောင့်လည်းမျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်အများ အပြား တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့သို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ဟု ချင်းမိုင်ရှိ သျှမ်းခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောပြပါသည်။
မောင်သန်းရွှေဦးဆောင်သောဗမာစစ်တပ်ကို ကချင်မြေပိုင်နက်ကနေ ထွက်ခွာသွားပါရန် ကချင်လူထုတွေဆန္ဒပြ
မောင်သန်းရွှေဦးဆောင်သောဗမာစစ်တပ်ကို ကချင်မြေပိုင်နက်ကနေ ထွက်ခွာသွားပါရန် ကချင်လူထုတွေဆန္ဒပြ၊ တစ်ခါမှမ ကြားဖူးသောနယ်ခြားစောင့်တပ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း ကချင်တပ်မတော်ကနာမလည်၊ တန်းတူအခွင့်အရေးနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာ န်းခွင့်၊ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲကချင်တပ်မတော်ကနာလည်ထား၏။ မြန်မာနိုင်ငံရေးလောကတွင် နောက် ဆုံးပေါ်စကားလုံးများဖြစ်သော နယ်ခြားစောင့်တပ်တို.၊မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ဒီမိုကရေစီတို.ဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက် ကိုင်တပ်ဖွဲ.များနာမလည်၊ပြည်သူလလူထုလည်းနာမလည်ဖြစ်နေ၊ထို.စကားလုံးတွေကို မွေးထုတ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်နာလည်သော မောင်သန်းရွှေတို.အုပ်စုတို.ကသာပြန်ယူသွားပါ၊ မောင်သန်းရွှေတို.တပ်မတော်အနေနဲ. မောင်သန်းရွှေနယ်ခြားကိုသာလုံးခြုံ အောင်စောင့်ပါ၊ဒို.နယ်မြေမှာလာပြီးတော့အပူလာမလုပ်နဲ.၊ ဒို.မြေမှာခင်ဗျာတို.အပူမပါဘူးဆိုတာ မှတ်ထားစမ်းပါ၊
နော်လွီဇာ ဘင်ဆင် သည် ဦးနှောက်ကင်ဆာရောဂါဖြင့်ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ.တွင်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို.မှာသေဆုံးသွားမှု အပေါ် တိုင်းရင်းသားအသံမှကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များနှင့်ကရင်အမျိုးသားအားလုံးအတွက် ထပ်တူထပ်မျှကြေးကွဲဝမ်းနည်းပါ ကြောင်းဘလော့ကနေ သဝဏ်လွှာပေးပို.လိုက်ပါသည်၊နော်လွီဇာဘင်ဆင် သေဆုံးခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားများအားလုံးနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်းအားစုများအတွက် မဟာဆုံးရှုံးကြီးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းရင်းသားအသံက ယုံကြည်သည်။
Benson, Naw Louisa
Born in Rangoon in 1941 the daughter ofaPortuguese Jew and his Karen wife. Naw Louisa became Miss Burma in both 1956 and 1958 and acted in number ofafilms. After studying in Boston she returned to Burma and, in 1964, married ex-5th Brigade Commander Lin Tin who had surrendered with Saw Hunter Tha Mwe. After LIn Tin's deathayear later near Thaton, she led his 5th Brigade back into the revolution. In 1967 she married an American, Glen Craing, and now lives in California where she is active inanumber of overseas Karen organisations and pro-democracy groups.
သြဂုတ်လ၊၂၀၀၆ မှာပြုလုပ်ခဲ့သော တိုင်းရင်းသားများစုံညီအစည်းအဝေးမှာနော်လွီဇာဘင်ဆင်ကိုတွေ.ရပုံ၊ (ရှေ.တန် ဘဲဘက် (၄)ယောက်မြောက်၊